Vaovao Faikany Ny Hoe Misokatra Ao Turkmenistan Ny Starbucks · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Septambra 2017 4:56 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Türkçe, Español, 日本語, 繁體中文, English
Atvatan Turkmenistan mitatitra momba ny Starbucks tsy izy . Pikantsarin'ny tranonkala.
Lahatsoratra fiaraha-miasa avy tao amin'ny EurasiaNet.org ity manaraka ity. Navoaka eto indray rehefa nahazoana alalana.
Tao amin'ny foiben'ny fivarotan-dehibe ao an-drenivohitr'i Turkmenistan, Ashgabat, nampilendalenda ny lela niaraka tamin'ny fomba fanaingona tahaka ny tena izy sy ny Frappuccinos amin'ny 15 manat ny marika fivarotana fisotroana kafe vaovao iray mitondra ny anarana “Starbucks” .
Raha ny zava-misy anefa dia tsy ilay tena izy io.
Taitra tampoka tamin'ny fanambarana ny media sosialy fa nisokatra ny Starbucks tao amin'ny tsenam-barotra iray nosokafan'ny mpitondra mpanjakazaka Gurbanguly Berdymukhamedov ary nanaovana fanambarana goavana tamin'ny herintaona.
Nanolotra ny sarin'ny fisotroana kafe ny tranokalam-baovao iray mifantoka amin'i Turkmenistan eo an-joron'ny toerana maitso iray tao amin'ny fivarotan-dehibe Bagtyyarlik izay voaravaka marbra fotsy ary hita mazava ny sary famantarana sy ny endriky ny orinasa manana foibe any Seattle .
Faly ihany koa ny ambasadaoron'i Armenia ao Turkmenistan ary nidera izany ho fahatongavan'ny fanatontoloana ao amin'ny firenena izay heverina ho iray amin'ireo toerna mitoka-monina indrindra manerantany.
Indrisy anefa fa nillaza tamin'i EurasiaNet.org ny Starbucks fa tsy misy ifandraisany amin'ilay varotra misandrahaka manerantany izy io.
“Afaka manamarina aho fa tsy manana fivarotana any Turkmenistan izahay,” hoy i Jaime Riley, talen'ny fifandraisan'ny orinasa Starbucks raha nanoratra fanehoan-kevitra tao amin'ny mailaka izy.
Tsy mbola hita ao amin'ny fampiasa fanondroan-toeran'ny fivarotana Starbucks ihany koa ilay fivarotana, izay manana fivarotana miisa 24.000 any amin'ny firenena miisa 70 samihafa. (Manana fivarotana betsaka ao Kazakhstan ny orinasa).
Ao amin'ny fisotroana kafe “Starbucks” hosoka, 12,50 manats ny vidin'ny cappuccino “lehibe” iray , avo roa heny amin'ny vidiny any amin'ny toerana fisotroana kafe malaza hafa ao Ashgabat.
Raha mitovy amin'ny 3.40 $ mahery izany amin'ny tahan'ny manat ofisialy amin'ny dolara dia tsara ny manamarika fa mahazo 6 manats ny dolara eo amin'ny varomaizina.
Nitarika ny fiakaran'ny vidin'entana avy any ivelany ny krizy ara-toekarena misy ao amin'ny firenena ankehitriny, vokatry ny fidinan'ny vidin'ny angovo manerantany. Noho izany, miankina amin'ny karazan'ny kafe sy ny vokatra hafa no ampiasain'ity voalaza fa starbucks ity, taratry ny fahefa-mividy marefon'ny sandam-bola ao an-toerana ny vidin'entana ao amin'ny fivarotana.
Matetika ny marika iraisam-pirenena no araraotina any Azia Afovoany Sovietika teo aloha. Ao an-drenivohitr'i Kyrgyzstan, Bishkek, nikatona tamin'ny taona 2014 ny trano fisakafoanana iray mampiasa ny marika TGI Friday rehefa nahazo taratasy fandrahonana avy any amin'ny trano fisakafoanana marika amerikana. Manana toerana fisotroana kafe Whatsapp sy Burger Kiиg ihany koa ity tanàndehibe ity, izay mendrika fitokisana tamin'ny fanavaozany nampiasa ny Endritsoratra Sirilika hialana amin'ny fanitsakitsahana ny fizakamanana.
Anisan'ny nanao sonia ny fifanarahana tao Berne i Turkmenistan, izay miaro ny fizakamanana amin'ny dingana sasany. Saingy tsy mpikambana ao amin'ny Fikambanana Ara-barotra Manerantany tahaka an'i Kyrgyzstan izy, izay mampiasa amin'ny fomba hentitra ny fizakamanana ara-tsaina.
Ny tena mahaliana indrindra amin'ity raharaha Turkmen ity dia izay mety ho tompon'ilay fisotroana kafe resahina.
Hita mazava fa toerana iray miavaka amin'ny fiavahana ara-toekarena ny toerana matoa nanatrika ny lanonana fanokafana ilay tsenambarotra Bagteyarlik i Berdymukhamedov. Ankoatra izany, mpandraharaha vitsy ihany no afaka mampidi-bola ao amin'ilay firenena mitoka-monina raha tsy misy ny fanohanana avy amin'ny fanjakana, izay nahatonga ny fanontaniana hoe iza no mety ho fiarovana ara-politikan'ilay fisotroana kafe.
Nisokatra talohan'ny Fisokafan'ny Fifaninanana Haiady sy ny Lalao anaty trano Aziatika 2017 ilay lazaina ho Starbucks, ary i Turkmenistan no hampiantrano izany amin'ity volana ity. Indrisy anefa fa toa tsy akaiky loatra an'ilay Tanàna Olaimpika naorina handray ny lalao ity Starbucks maka tahaka ity, noho izany mila mitady lalana ireo mpitia fanatanjahantena mpisotro kafe raha te-hanandrana kafe tsy tena avy any Seattle.